အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကိုတောင် သင့်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုအချက်တွေ လုံးဝမပြောပြသင့် – Trend.com.mm
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကိုတောင် သင့်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုအချက်တွေ လုံးဝမပြောပြသင့်
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်တယ်၊အကြံဥာဏ်တောင်းတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်လောက်ပဲခင်တဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ၊ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောပြသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးလဲဆိုရင်…
အတွဲတိုင်းလိုလိုရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အကူအညီ တောင်းမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့။သူငယ်ချင်းတွေက ကူညီပေး လိုက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေသွားချင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းက တကယ်တော့ မကောင်းပါဘူး။ဒီတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေဖြေရှင်းပေးလိုက်လို့ပြေလည်သွားမယ်။နောက်တစ်ခါ ကျရင်ရော…? ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပြီး အကူအညီတောင်း ဖြေရှင်းခိုင်းတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။သင်တို့နှစ်ယောက် ရဲ့ ပြဿနာ ကို နှစ်ယောက်တည်းပဲ နားလည်မှုရှိစွာဖြေရှင်းတာအကောင်းဆုံးပါ။
ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ပါစေ ဘေးလူတွေရဲ့ ခံစားချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းပါနဲ့။ရင်ဖွင့်တာကတော့ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
၂)သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သူငယ်ချင်းကိုပြောပြတာမျိုး…
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဆုံးရှုံးဖို့လွယ်သလို ပြန်ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်။သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုယုံကြည်လို့သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်။ဒါကို သင်ကသင့်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးပဲဆိုပြီးပြန်ပြောပြမယ်။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူက ဒါကိုသိသွားခဲ့ရင်၊သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သင့်အပြင်နောက်တစ်ယောက် ကပါသိနေတယ်ဆိုရင် သင့်အပေါ်ယုံကြည်မှုထားဖို့ပျက်ပြားသွားပါလိမ့်မယ်။အခန့်မသင့်ရင် ဒါက သင်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူရဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အကြောင်းဖြစ်စေ၊အမှားအယွင်း လုပ်မိတဲ့အကြောင်းဖြစ်စေ၊ငွေကြေးပြဿနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းကိုပြောပြတာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီလိုဖွင့်ပြောပြတာဟာ သင့်ချစ်သူအပေါ်လေးစားမှုမရှိတာ၊စကားကိုမထိန်းသိမ်းတာ၊သူတို့ကိုတစ်ခြားသူအထင်အမြင်သေးတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
ချစ်သူစုံတွဲရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဒါက သူ့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်၊ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုနားလည် လက်ခံနိုင်လို့ဖြစ်လာတာပါ။ကိုယ်ကသူ့အကျင့်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ဒါက နှစ်ယောက်ကြားမှာပဲထားသင့်တဲ့စကားပါ။သင့်သူငယ်ချင်းကို င့ါချစ်သူကတော့ ဘယ်လိုအကျင့်ဆိုးမျိုးရှိတယ်၊အဲ့ဒါကို ငါကလုံးဝမကြိုက်ဘူးစသဖြင့်မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒါက သင့်သူငယ်ချင်းက သင့်ချစ်သူကိုအထင်သေးသွားတာမျိုးဖြစ်စေသလို သင့်ချစ်သူအနေနဲ့လည်း ဒီလိုသူ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကအထင်သေးနေတာမျိုးဆို ဘယ်လိုမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၅)သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြတာမျိုး… သင့်ချစ်သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တင်မကပါဘူး။သင်တို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေ၊အသံဖိုင်တွေ၊ အီးမေးလ်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေကိုပြလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ကိုတော့ သေချာသတိထား ပြီးရှောင်ပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။သင့်ချစ်သူကသူသင့်ကိုပြောတဲ့ချစ်ကြည်နူးစရာစကားတွေကို သင့်သူငယ်ချင်းကိုမြင်စေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုသူငယ်ချင်းကိုပြတာဟာ သူ့အပေါ်အလေးမထား သလို၊မလေးစားသလိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။
၆)သင့်သူငယ်ချင်းဘယ်သူဘယ်သူကိုတော့ဖြင့် သင့်ချစ်သူက သဘောမကျဘူးဆိုတာမျိုး… သင့်ချစ်သူက သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကို သဘောမကျဘူး၊ မျက်စိနောက်တယ်ဆိုရင်တောင်ဒါကိုသင်တစ်ယောက်တည်းပဲသိထားသင့်ပါတယ်။သင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အဲ့တစ်ယောက်ကိုငါ့ချစ်သူကသဘောမကျဘူး၊ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီးပြောပြတာမျိုးက သင့်ချစ်သူကစိတ်သဘောထားသေးသိမ်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဟိုသူငယ်ချင်း ပြန်ကြားတဲ့အခါမှာလည်း သင့်ချစ်သူအပေါ်အထင်အမြင်မကောင်းစေပါဘူး။ ချစ်သူစုံတွဲဆိုတာသူငယ်ချင်းတွေထက်လည်းပိုတဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူစိမ်းပါ။ချစ်သူတွေကြားမှာထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့လျှိ့ဝှက်ချက်တွေ၊အကြောင်းအရာတွေ၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကို မမေ့ပါနဲ့။
သင့်ချစ်သူကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ရော ၊သင့်ကိုယ့်သင်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ရော သင်တို့ရဲ့လေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ရော ဒါလေးတွေကိုတော့ ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါစေ မပြောပြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ကိုယျ့ရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တိုငျပငျတယျ၊အကွံဉာဏျတောငျးတယျဆိုတာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဘယျလောကျပဲခငျတဲ့သူငယျခငျြးဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူ၊ကိုယျ့ရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့မပွောပွသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာတှရှေိပါတယျ။ဘယျလိုအကွောငျးအရာမြိုးလဲဆိုရငျ…
အတှဲတိုငျးလိုလိုရနျဖွဈကွပါတယျ။ဒီလိုရနျဖွဈတဲ့အခါမှာ သူငယျခငျြးတှဆေီက အကူအညီ တောငျးမယျ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲ၊ဘယျလိုပွောရမလဲပေါ့။သူငယျခငျြးတှကေ ကူညီပေး လိုကျတဲ့အခါ အဆငျပွသှေားခငျြသှားနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီနညျးလမျးက တကယျတော့ မကောငျးပါဘူး။ဒီတဈခါ သူငယျခငျြးတှဖွေရှေငျးပေးလိုကျလို့ပွလေညျသှားမယျ။နောကျတဈခါ ကရြငျရော…? ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး သူငယျခငျြးတှကေိုပွောပွပွီး အကူအညီတောငျး ဖွရှေငျးခိုငျးတာဟာကောငျးမှနျတဲ့အကွံဉာဏျတဈခုမဟုတျပါဘူး။သငျတို့နှဈယောကျ ရဲ့ ပွဿနာ ကို နှဈယောကျတညျးပဲ နားလညျမှုရှိစှာဖွရှေငျးတာအကောငျးဆုံးပါ။
ဘယျလိုပွဿနာမြိုးဖွဈပါစေ ဘေးလူတှရေဲ့ ခံစားခကျြ၊ဆုံးဖွတျခကျြပျေါမှာမူတညျပွီး သငျတို့နှဈယောကျရဲ့ ပွဿနာကို မဖွရှေငျးပါနဲ့။ရငျဖှငျ့တာကတော့ ဖှငျ့လို့ရပါတယျ။
၂)သူ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကို သူငယျခငျြးကိုပွောပွတာမြိုး…
ယုံကွညျမှုဆိုတာ ဆုံးရှုံးဖို့လှယျသလို ပွနျရဖို့ခကျခဲပါတယျ။သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကိုယုံကွညျလို့သူ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတဈခုကိုပွောပွမယျ။ဒါကို သငျကသငျ့သူငယျခငျြးအရငျးကွီးပဲဆိုပွီးပွနျပွောပွမယျ။ တကယျလို့သငျ့ခဈြသူက ဒါကိုသိသှားခဲ့ရငျ၊သူ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကို သငျ့အပွငျနောကျတဈယောကျ ကပါသိနတေယျဆိုရငျ သငျ့အပျေါယုံကွညျမှုထားဖို့ပကျြပွားသှားပါလိမျ့မယျ။အခနျ့မသငျ့ရငျ ဒါက သငျတို့ရဲ့အကွီးမားဆုံးပွဿနာဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူရဲ့ ငှကွေေးအခကျအခဲကွုံနရေတဲ့အကွောငျးဖွဈစေ၊အမှားအယှငျး လုပျမိတဲ့အကွောငျးဖွဈစေ၊ငှကွေေးပွဿနာနဲ့သကျဆိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှေ နဲ့ပတျသကျပွီး သငျ့သူငယျခငျြးကိုပွောပွတာမြိုးလညျးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ဒီလိုဖှငျ့ပွောပွတာဟာ သငျ့ခဈြသူအပျေါလေးစားမှုမရှိတာ၊စကားကိုမထိနျးသိမျးတာ၊သူတို့ကိုတဈခွားသူအထငျအမွငျသေးတာမြိုးဖွဈစပေါတယျ။
ခဈြသူစုံတှဲရယျလို့ဖွဈလာရငျ ဒါက သူ့ရဲ့ အကငျြ့စရိုကျ၊ကိုယျ့ရဲ့အကငျြ့စရိုကျတှကေိုနားလညျ လကျခံနိုငျလို့ဖွဈလာတာပါ။ကိုယျကသူ့အကငျြ့ကိုမကွိုကျဘူးဆိုရငျလညျး ဒါက နှဈယောကျကွားမှာပဲထားသငျ့တဲ့စကားပါ။သငျ့သူငယျခငျြးကို င့ါခဈြသူကတော့ ဘယျလိုအကငျြ့ဆိုးမြိုးရှိတယျ၊အဲ့ဒါကို ငါကလုံးဝမကွိုကျဘူးစသဖွငျ့မပွောသငျ့ပါဘူး။ ဒါက သငျ့သူငယျခငျြးက သငျ့ခဈြသူကိုအထငျသေးသှားတာမြိုးဖွဈစသေလို သငျ့ခဈြသူအနနေဲ့လညျး ဒီလိုသူ့ကိုတဈယောကျယောကျကအထငျသေးနတောမြိုးဆို ဘယျလိုမှခံနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
၅)သငျတို့နှဈယောကျကွားက လြှို့ဝှကျခကျြတှကေိုပွောပွတာမြိုး… သငျ့ခဈြသူရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြတငျမကပါဘူး။သငျတို့နှဈယောကျပွောတဲ့စကားတှေ၊အသံဖိုငျတှေ၊ အီးမေးလျတှကေို သူငယျခငျြးတှကေိုပွလရှေိ့တယျဆိုရငျဒီအခကျြကိုတော့ သခြောသတိထား ပွီးရှောငျပါလို့အကွံပေးလိုကျပါတယျ။သငျ့ခဈြသူကသူသငျ့ကိုပွောတဲ့ခဈြကွညျနူးစရာစကားတှကေို သငျ့သူငယျခငျြးကိုမွငျစခေငျြမှာမဟုတျပါဘူး။ဒီလိုသူငယျခငျြးကိုပွတာဟာ သူ့အပျေါအလေးမထား သလို၊မလေးစားသလိုလညျးဖွဈစပေါတယျ။
၆)သငျ့သူငယျခငျြးဘယျသူဘယျသူကိုတော့ဖွငျ့ သငျ့ခဈြသူက သဘောမကဘြူးဆိုတာမြိုး… သငျ့ခဈြသူက သငျ့သူငယျခငျြးတှထေဲကတဈယောကျယောကျကို သဘောမကဘြူး၊ မကျြစိနောကျတယျဆိုရငျတောငျဒါကိုသငျတဈယောကျတညျးပဲသိထားသငျ့ပါတယျ။သငျ့သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျကို အဲ့တဈယောကျကိုငါ့ခဈြသူကသဘောမကဘြူး၊ဘာဖွဈလို့ညာဖွဈလို့ ဆိုပွီးပွောပွတာမြိုးက သငျ့ခဈြသူကစိတျသဘောထားသေးသိမျနသေလိုဖွဈနပေါတယျ။ ဟိုသူငယျခငျြး ပွနျကွားတဲ့အခါမှာလညျး သငျ့ခဈြသူအပျေါအထငျအမွငျမကောငျးစပေါဘူး။ ခဈြသူစုံတှဲဆိုတာသူငယျခငျြးတှထေကျလညျးပိုတဲ့အရငျးနှီးဆုံးသူစိမျးပါ။ခဈြသူတှကွေားမှာထိနျးသိမျးသငျ့တဲ့လြှိ့ဝှကျခကျြတှေ၊အကွောငျးအရာတှေ၊ကိုယျရေးကိုယျတာတှရှေိပါတယျ။အဲ့ဒါတှကေို မမပေ့ါနဲ့။
သငျ့ခဈြသူကိုလေးစားတဲ့အနနေဲ့ရော ၊သငျ့ကိုယျ့သငျလေးစားတဲ့အနနေဲ့ရော သငျတို့ရဲ့လေးနကျတဲ့ဆကျဆံရေးကိုတနျဖိုးထားတဲ့အနနေဲ့ရော ဒါလေးတှကေိုတော့ ဘယျလောကျပဲရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးဖွဈပါစေ မပွောပွဖို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခြင်းခံရခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်များအကြောင်း